UWinnie Mandela uyaqhubeka nokulwa
Naphezu kwemiyalo yokuvimbela ukunyakaza kwakhe, uWinnie Mandela waqhubeka esebenza emzabalazweni wokuwahlukanisa ngokohlanga. Ngo-1969 waboshwa ngaphansi kwesigaba sesithupha soMthetho Wobuphoqi ngenkani okwakusho ukuthi noma ubani angaboshwa ngaphandle kwencwadi yemvume futhi agcinwe ngokungenamkhawulo ngaphandle kosizo lwezomthetho uma bebhekwa njengengozi emthethweni nasemyalweni.
Ngesikhathi eboshiwe uWinnie wayeboshwe yedwa izinyanga ezingu-18, izinsuku ezingu-200 zokuqala ezazingenakho ukuxhumana nabantu ngaphandle kweqembu lokuphenya elimhlupha ngokungapheli. Iseli lakhe lanikezwa izingubo zokulala ezintathu ezincane ezinembungulu, ezigcwele umchamo; ibhodlela lamanzi leplastiki; ibhakede lokuhlanza ngaphandle kwesibambo. Ibhalbhu elikhanyayo lishiswa phezu kwakhe njalo, lidida nganoma yimuphi umqondo wobusuku noma usuku.
Ukuhlukunyezwa ngaphansi kwalezi zimo kwakungenamhawu. UWinnie wayevinjelwe ukulala izinsuku ezinhlanu ngesikhathi abaphenyi bemcindezela ukuba bathole ulwazi. Ekugcineni kwafika esinye isiboshwa futhi wabheka njengoba besihlupha. Abaphenyi bamtshela ukuthi ukumelana kwakhe kwakuyimbangela yezinhlungu zakhe neziboshwa ezihlukunyeziwe.
Wehluleka Ukubhekana nesimo
Ngemva kokuhlukunyezwa izinsuku ezimbalwa futhi ebuke ukuhlukunyezwa kwesinye isiboshwa, uWinnie wagcina eseqhekekile, ethembise ukuphendula imibuzo yababuza imibuzo. Icala lakhe laqala ngoDisemba 1969 futhi kwaholela ekukhululweni ngaphandle kokulahlwa ngecala. Kwahlelwa umyalelo omusha wokuvinjelwa. Lo okhawulela ngokwengeziwe kunalo wokugcina. Wayengavunyelwe ukushiya indlu yakhe phakathi kuka-6 ekuseni no-6 ntambama.
UWinnie uvakashele uyise eTranskei ngaphambi kokuba umyalelo wokuvinjelwa uqale ukusebenza. Kusukela ngesikhathi sokugcina lapho bekhulume ubaba wakhe uye wadumala ngesistimu yezwe lakubo eyabekwa phambili nguhulumeni wobandlululo. Ngesikhathi lo myalelo wokuvinjelwa usuqalile futhi wavakashela umyeni wakhe, uNelson Mandela, eRobben Island. Izimo zokuvakasha zazikhanuliwe futhi engakwazi ukukhuluma nomyeni wakhe ngokukhululekile, uWinnie washiya enganelisekile. Kamuva ekhaya wazama ukubhekana nesimo.
Amaphoyisa aqhubeka nokuhlukumeza futhi indlu yakhe yayivame ukwephulwa ngobudlova nje, idutshulwe noma iqhumiswe amabhomu. Naphezu kwakho konke uWinnie wabekezela kuleli phuzu, ukukholelwa kwakhe kulesi sizathu kwaqina futhi waqhubeka nokubeka phambili umyalezo wokuthi angeke asabe.
UWinnie uphinde waboshwa ngo-1973 ngoba wahlangana nomunye umuntu ovinjelwe, umthathi wezithombe uPeter Magubane. Isigwebo sakhe sezinyanga eziyishumi nambili senzelwe ejele laseKroonstad, kodwa wathola ukuhlala kwakhe kungenzima futhi wakhululwa izinyanga eziyisithupha ngaphambili. Lapho i-oda lakhe lokuvinjelwa liphela ngo-1975 alizange livuselelwe.
Waqhubeka ehileleke ngokujulile ekubhikisheni kwabafundi baseSoweto ngo-1976. Wasiza ekusunguleni iSoweto Parents 'Association futhi waya kulabo ababoshiwe nabalimele emiphakathini yabafundi. Ngisho noma uWinnie esebenzela umsebenzi osizayo ekubhikisheni, uhulumeni wasebenzisa yena njengesisulelo. Bambopha bamthatha izinyanga ezinhlanu ngaphambi kokumnika omunye umyalelo wokuvinjelwa ngo-1977.
Ngonyaka ka-1977 futhi uWinnie Mandela waxoshelwa edolobheni elithuli laseBrandfort eFree State. Kwakukhona ukuthi uzophoqeleka ukuba ahlale iminyaka eyisikhombisa ezayo. Izikhulu zikahulumeni zitshele izakhamuzi zaseBrandfort ukuthi uWinnie uyingozi nokuthi kufanele bemzibe. Noma kunjalo, uWinnie wayengenakukhathala ekusebenzeni kwakhe futhi wakwazi ukwakha umphakathi owawuzungezile.
Ngesikhathi eseseBrandfort waqala ikhishi lesobho, ukuhlanganiswa kwezitshalo zendawo, umtholampilo ohambayo, isikhungo sokunakekelwa kwesikhashana, isikhungo sokuthunga kanye nenhlangano yezintandane kanye nezingane ezigangayo.